Maxkamad Faransiis ah ayaa xukuntay Clint Eastwood - Jowhar somali news leader
THE DRAMATIC EVALUATIONS OF THE WINNER OF THE NOBEL PRIZE LUC…
The Netherlands beats N. Macedonia to complete perfect group C, Austria…
EU, US, UK and Canada pile up sanctions against Belarus over…
Fuel shortage in Lebanon leads to hours of queues and armed…
Iran’s hardline elected president rules out meeting Biden, who is open…
Spain’s Sanchez announces pardon for imprisoned Catalan separatist leaders
Home NEWS Maxkamad Faransiis ah ayaa xukuntay Clint Eastwood
Maxkamad Faransiis ah ayaa xukuntay Clint Eastwood
Maxkamad kutaala Faransiiska ayaa xukuntay in Clint Eastwood uusan markhaati furikarin inta lagu gudajiray maxkamadeynta tuhmane Islaami ah oo toogasho geystay, weerarkiisi tareenka xawaaraha dheereeya ay ka hortageen seddex Mareykan ah, oo markii dambe jilayay filim Aktarka Mareykanka iyo agaasimaha.
Maxkamadeynta muwaadin u dhashay Morocco Ayoub el Khazzani, oo rasaas ku furay tareenka Thalys ee ku safraya waqooyiga Yurub bishii Ogosto 2015, ayaa Isniinta ka bilaabmay Paris. Garyaqaanka Khazzani ayaa codsaday ka hor intaan maxkamadu bilaaban in maxkamadu ay ugu yeerto Eastwood markhaati wuxuuna ku andacooday inuu “wax yar ka iftiimin karo” xaqiiqada muuqaalada lagu soo bandhigay filimkiisa.
Filimka Eastwood wuxuu ku saleysan yahay buug ay qoreen seddexdaas oo cinwaan looga dhigay “The 15: 17 ilaa Paris: Sheekada dhabta ah ee Argagixiso, Tareen, iyo Saddex Geesiyaal Mareykan ah”.
Khazzani wuxuu u sheegay baarayaasha ka hor maxkamadeynta inuu go’aansaday inuu ka horyimaado weerarka ilbiriqsigii ugu dambeeyay laakiin ay goor dambe tahay in laga fogaado iska horimaadka rakaabka, ilo sharci ayaa sidaas yidhi.
Si kastaba ha noqotee, filimku ma muujinayo isbeddelkan qalbiga ah ee lagu eedeeyay. Qareenka difaaca wuxuu ka baqay in filimku saameyn ku yeesho aragtida dadka ee weerarka. Waxay rabtay inay weydiiso Eastwood tilmaamaha uu agaasime ahaan ugu siiyay jilayaasha.
Dacwad oogayaasha ka dhanka ah argagixisada ayaa ka horyimid codsigii qareenka.
Waxay sheegeen in Eastwood uusan goob joog u ahayn dhacdadaas isla markaana aysan macno samaynaynin in 90 jir looga waco bartanka masiibada. Waxay ku eedeeyeen difaaca inuu isku dayayo inuu “abuuro buuq”.
Xaakimka ayaa diiday codsiga, wuxuuna ku dooday in Spencer Stone, Anthony Sadler iyo Alek Skarlatos, oo ah dhalinyarada Mareykanka ee dhaqdhaqaaqeysay Khazzani ka hor inta aan qofna la dilin, ay markhaati ka noqon doonaan Khamiista iyo Jimcaha.
Saddexda nin waxaa bilad sharaf gudoonsiiyey madaxweynihii faransiiska ee waqtigaas Francois Hollande, oo uu weheliyo Mark Moogalian, oo ah borofisar Mareykan Faransiis ah oo uu khazzani dhabarka kaga toogtey bastoolad kadib markuu qaatay qorigiisa Kalashnikov. Moogalian, oo hadda ah 56, ayaa sidoo kale u muuqan doona markhaati maalinta Khamiista.
Previous article“It’s time to release my sister, Saudi activist Loujain al-Hathloul”
Next articleFrench “documentary” gives voice to Covid-19 conspiracy theories
Guddiga La dagaalanka Musuqmaasuqa oo war kasoo saaray Guddiyada Doorashoyinka iyo Ergooyinka
Avv Dhagay oo faahfaahiyay jadwalka iyo tababarka guddiga doorashooyinka
Maxkamad amartay in sharciga la horkeeno askari ka dambeeyay dilka Sheekh Cali Dheere
The Netherlands beats N. Macedonia to complete perfect group C, Austria achieves first ever...
hanad - June 21, 2021
EU, US, UK and Canada pile up sanctions against Belarus over forced diversion of...
Fuel shortage in Lebanon leads to hours of queues and armed clashes
Iran’s hardline elected president rules out meeting Biden, who is open to re-establishing ties...